Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere iyo xubno sarsare oo lagu dilay weerarkii Kunya Barrow - Latest News Updates
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan weerar ciidamada Komandoska Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay ku qaadeen degaanka Kunya Barrow ee dhinaca koonfur ka xiga magaalada Baraawe gobolka Shabeellaha hoose.
Dallad lagu magacaabo SOFREP oo ay leeyihiin ciidamada Milateriga Soomaaliya ayaa shaacisay in weerarka oo dhacay maalinimadii Khamiista lagu guuleystay halkii bar tilmaameedkiisu ahaa isla markaana lagu dilay afhayeenka ururka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage iyo Taliyihii hoggaaminayay maleeshiyada degaankaasi.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xubnaha sare ee ka tirsan xarakada Al-Shabaab iyo maleeshiyo badan la dilay intii uu weerarka socday isla markaana la burburiyay gebi ahaanba saldhiyo ay ku lahaayeen degaanka Kunya Barrow.
Saldhigga la weeraray ee ay degenaayeen ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inuu ahaa midka ugu weyn ee ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha, isla markaana ay ka kontrooli jireen dhaqdhaqaaqyadooda.
Dhinaca kale ururka Al-Shabaab wax hadal ah kama soo saarin weerarka lagu qaaday fariisinkoodii degmada Kunya Barrow, iyadoo ciidamada Komandos-ka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka sii daayeen maxaabiis u xirnaa Al-Shabaab.